चरमोत्कर्ष के हो ? - Health Chautari Health Chautari
६ आश्विन २०७७, मंगलवार २२:२६
Published on : ६ आश्विन २०७७, मंगलवार २२:२६
अग्र्याजम या चरमसुख या चरमोत्कर्ष भनेको सम्भोग गर्दा प्राप्त हुने तीव्र र आनन्ददायी शारीरिक सुख हो । हस्तमैथुनद्वारा पनि चरमसुख प्राप्त गर्न सकिन्छ । हरेक व्यक्तिको अग्र्याजमको अनुभूति फरक हुन्छ । मनका थुप्रै भावना वर्णन गर्न नसकिएजस्तै अग्र्याजमलाई पनि यही हो भनेर वर्णन गर्न सकिन्न । पुरुष वीर्य स्खलन हुँदा चरमोत्कर्षमा पुग्छन् । तर, महिलाको चरमसुख अलिक जटिल प्रकृतिको हुन्छ । चरमोत्कर्षमा पुग्दा मुटु जोडजोडले चल्छ अर्थात् यसको गति दु्रत हुन्छ ।
श्वासप्रश्वासको गति पनि द्रुत हुन्छ । महिलाको चरमसुख पुरुषको भन्दा जटिल हुन्छ । योनीका मांसपेशीहरूमा खिचाव आउँदा महिलालाई चरमसुखको अनुभूति हुन्छ । तर, हरेक सेक्समा महिलाले चरमसुख प्राप्त गर्छिन् भन्ने हुँदैन । महिलाको चरमसुख उनको पुरुषसाथीको यौन दक्षता र आफ्नो शारीरिक र मानसिक अवस्थामा निर्भर गर्छ । भनिन्छ, २० देखि २५ प्रतिशत महिलाले मात्रै चरमसुख प्राप्त गर्छन् । सम्भोग गर्दा महिलाको योनीका क्लिटोरिस र जी स्पट उत्तेजित भए भने महिलाले चरमसुख प्राप्त गर्छिन् । यौनसम्बन्धी ज्ञानको कमी र खुलेर कुरा गर्न नसक्नुले धेरै महिला चरमसुखबाट वञ्चित हुन्छन् । केहीलाई त जिन्दगीभरि अग्र्याजमको स्वादै थाहा हुँदैन । डिप्रेसनका बिरामीमा किन सेक्सको रुचि हुँदैन ?
डिप्रेस्ड मानिस उदास, थकित र उत्साहहीन हुन्छन् । उनीहरूमा साथीसंगीहरूसँग हाँसखेल गर्ने या कनुै मनोरञ्जनका काम गर्ने रुचि नै हुँदैन । डिप्रेसनबाट पीडित अधिकांश स्त्री–पुरुष दुवैलाई सेक्सप्रति रुचि हु“दैन । अझ डिप्रेस्ड महिला बढी प्रभावित हुन्छन् । उदासी र खिन्नता, नकारात्मक विचारहरूले गर्दा डिप्रेस्ड व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक ऊर्जा पनि कम हुन्छ । डिप्रेसनका रोगीले कि त बढी खान्छन्, बढी सुत्छन् र मोटाउ“छन्, कि त कम खान्छन्, राम्रोसँग निदाउँदैनन् र दुब्लाउ“छन् । यसरी डिप्रेस्ड मानिसको शारीरिक स्वास्थ्य पनि बिग्रिन्छ ।
उत्साहहीनता र ऊर्जाहीनताका कारण शारीरिक क्षमतामा पनि कमी आउँछ । अनि, सेक्स प्रक्रियामा अवरोध देखापर्छ । अपराधबोधका कारण अयोग्य आत्मछवि सिर्जना हुन्छ । सेक्स प्रक्रियामा कठिनाइ, नकारात्मक विचार तथा अनावयक शंका–उपशंकाका कारण पतिपत्नीको सम्बन्ध नै धरापमा पर्न सक्छ । परिवार नै भताभुंग हुन सक्छ । डिप्रेसन जटिल बन्यो भने जिन्दगी नै बर्बाद हुन सक्छ ।
Tags : याैन याैनस्वास्थ्य
स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सकिने यस्तो छ अध्यादेश, उल्लंघन गरे एक वर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना